Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Esona Sona Sixhobo sihle ngokuchasene ne-COVID-19 Delta eyahlukileyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Njengoko i-COVID-19 Delta eyahlukileyo iqhubeka ukusasazeka ngokukhawuleza e-United States, amaZiko oThintelo noLawulo lweZifo (i-CDC) ikhuphe isikhokelo esitsha, ngakumbi ngokubhekisele ekunxibeni iimaski, kwaye iyasebenza nakwabo bagonywe .
Iingcebiso ezilungileyo ezivela kwiCDC kuwo wonke umntu - ugonyiwe okanye cha - kukuzifihla.
I-CDC ithi oku kubaluleke ngakumbi kubantu abangenakunyanzeliswa.
Abo basemngciphekweni omkhulu babandakanya ukuvezwa komntu oye wavavanya ukuba unesifo seswekile, imeko zentliziyo, kwaye otyebe kakhulu.
Uhlaziyo lwamva nje lweCDC ukusukela namhlanje, nge-27 kaJulayi, ngo-2021, ijolise kubantu abagonywe ngokupheleleyo kwaye isekwe kubungqina obutsha kwi-B.1.617.2 (Delta) eyahlukileyo e-United States.
I-CDC yongeze isincomo kubantu abagonywe ngokupheleleyo ukuba banxibe imaski kuseto lwangaphakathi loluntu kwiindawo zosasazo olukhulu okanye oluphezulu. Ukongeza, i CDC Yathi abo bantu banokufuna ukunxiba imaski ngaphandle kwenqanaba losasazo, ngakumbi ukuba abakhuselekanga emzimbeni okanye basemngciphekweni wesifo esibuhlungu esivela kwi-COVID-19.
Kukwasebenza kwanjalo oku ukuba kukho umntu ekhayeni lakhe ongafakwanga emzimbeni, emngciphekweni wesifo esibi, okanye ongagonywanga ngokupheleleyo. Abantu abasemngciphekweni wokuhlaselwa sisifo esibuhlungu kubandakanya abantu abadala kunye nabo baneemeko ezithile zonyango, ezinje ngeswekile, ukutyeba kakhulu okanye ukutyeba kakhulu, kunye neemeko zentliziyo.